गत मंगलबारदेखि सार्वजनिक यातायात खुलाइएसँगै , फेरी आयो विज्ञहरू यस्तो चेतावोनी – Classic Khabar
July 2, 2021 100
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएकाले घट्न समय लागेको तर्क गर्छन्। ‘हामीले वैशाखको मध्यभन्दा चैतको मध्यदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको भए संक्रमण धेरै तल झर्न सक्थ्यो तर ढिलो हुँदा यसले व्यापक रूपमा फैलिने मौका पायो,’ उनी तर्क गर्छन्। देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो आएकाले प्राकृतिक कारणले मानिसको आवतजावत कम हुने हुँदा तत्काल संक्रमण ह्वात्तै नबढे पनि भदौपछि यो फेरि बढ्न सक्ने उनी बताउँछन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Prev१४ बर्ष बिदेश बसेर फर्किदा न श्रीमान हुनुहुन्छ न त छोरा नै , हेर्नुहोस
Nextमनसुन सक्रिय भएसँगै निरन्तर वर्षा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
जवानी चढ्दै गएका दीपेन्द्र र देवयानीको लन्डनमा पहिलो डेटिङ, अनि देवयानीले दिएको त्यो महँगो उपहार !
काठमाडौवाट सुर्खेत गएको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण हुन सकेन, नेपालगन्ज फर्काइयो-के हो समस्या ?